गाएक पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट गितबारे प्रधानमन्त्री ओलिले मुख खोले-हेर्नुहोस ( भिडियो सहित) - Nepali news..
गाएक पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट गितबारे प्रधानमन्त्री ओलिले मुख खोले-हेर्नुहोस ( भिडियो सहित)
Prevलामो समय पछि भाइरल हेमा मिडियामा, यत्रो परिबर्तन देखिइन, खोलिन यस्ता गोप्य कुराहरु-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
Nextभाग्य न्यौपानेले भेटे फेरी अर्की मेघा जस्तै दुई हात नभएकी युवती तर उनि अपाङ्ग भएपनि पढ्दै छिन ब्याचलर, सहयोगको अपिल-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
ज्यान जोगाएर नेपाल फर्किएका प्रेमले अब रवि लामिछानेलाई हिसाब बुझाउन पर्छ । रविलाई बुझाउन पर्ने हिसाबबारे प्रेमकी श्रीमतीले यो भिडियोमा सबै रहस्य खोलिन् हेर्नूहोस
सरकारले तोक्यो सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडादर !, हेर्नुहोस् सूचीसहित कहाँ पुग्न कति ?
धट्यो डलरको भाउ। आज पैसा पठाउदै हुनून्छ? हेर्नूहोस बिदेशी मूद्राको आजको दर भाउ।।।
रिहा भए ज्ञानेन्द्र शाही ! समर्थकहरुले यस्री घेरी यस्तो नाराबाजि र आक्रोश-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)